Heshiisyada wadajirka ah: heshiis shirkadeed oo yareynaya mushaharka ka bixista haddii ay dhacdo tabar darri
Qof shaqaale ah, oo ahaa wakiil ganacsi oo ka dhex jira shirkad diyaaradeed, ayaa shaqada looga eryay karti-darrida iyo suurtagal la'aanta dib-u-qorista.
Waxay la wareegtay maxkamadaha shaqada si ay u hesho xusuusin ah magdhaw joojin.
Xaaladdan oo kale, heshiis shirkadeed ayaa meel dhigay magdhaw goosasho ah, oo inta ay ku kala duwan tahay ay sabab u tahay eryidda:
haddii shaqaalihii shaqada looga eryay sababo anshax xumo ah ama aanu ku xidhnayn karti la'aan, heshiiska ayaa dhigayay in xaddiga ugu badan ee mushaharka shaqadu ay noqon karto ilaa 24 bilood oo mushahar ah;
Dhinaca kale, haddii shaqaalihii shaqada laga eryay, ama khalad ama karti darro darteed, heshiiska shirkaddu wuxuu tixraacayaa heshiiska wadajirka ah ee shaqaalaha dhulka ee shirkadaha duulimaadyada hawada (art. 20), oo xaddidan mushaharka mushaharka 18 bilood ah.
Qofka shaqaalaha ah, ee laga saaray saqafka 24-ka bilood ee ay bixisay ...
Heshiisyada wadajirka ah: suurta gal ma tahay in la bixiyo magdhaw joojin ka duwan oo ku xiran sababta joojinta? July 10th, 2021Tranquillus
horeCPF - Koontadayda Tababbarka - Ku maalgeli tababarkaaga xirfadeed
socdaShaqaynta taleefanka: shaqaaluhu ma ka faa'iideystaa foojarrada cuntada?
Khatarta weerarrada madaxfurasho ee Faransiiska iyo Jarmalka oo ay arkeen ANSSI iyo BSI